नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले कहाँ-कहाँबाट निकाल्यो जुलुस ? - Naya Aawaj
नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले कहाँ-कहाँबाट निकाल्यो जुलुस ?
आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माधव-प्रचण्ड समूहले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट जुलुस निकालेको छ। बिहान ११ बजेबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा विभिन्न स्थानबाट पुलचोक, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, केशरमहल र जमललाई केन्द्र बनाएर जुलुस निकालेका हुन्।
उनीहरु सुन्धारामा हुने मुल प्रदर्शनमा १२ बजे आइपुगेपछि सुनधारामा मूल भृकुटीमण्डपमा हुने विरोधसभामा सहभागी हुने नेकपाले जनाएको छ।
विरोध सभामा सहभागी हुन नेकपाले गाउँ-गाउँबाट कार्यकर्तालाई काठमाडौंमा उतारेको छ। विरोधसभालाई अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ। एउटा समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका छन् भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रचण्ड र नेपालले गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भए पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले आन्दोलन चर्काइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली समूहले भने माघ २३ गते नारायणहिटी दरबार अगाडि सभा गरेर निर्वाचनमा जुट्न आह्वान गरेको थियो। ओली समूहले दरबारमार्गस्थित नारायणहिटी दरबार अगाडि गरेको शक्ति प्रदर्शन लगत्तै प्रचण्ड समूहले जवाफी आन्दोलनको रुपमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो।
नेकपाले जुलुस निकाल्न थालेपछि उक्त क्षेत्र भएर हिँड्ने सवारी ट्राफिक जाममा परेका छन्। सन्धारामा मुल प्रदर्शन र रत्नपार्क-भृकुटीमण्डप सडकखण्डको मुख्य सडक नै थुनेर सभा गर्न लागिएपछि विशेषगरी टुँडीखेल वरिपरि र चक्रपथ भित्रको ट्राफिक प्रभावित हुने भएको हो।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले र्‍याली, जुलुस र आमसभा हुने स्थान सार्वजनिक भएकाले ट्राफिकका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।